Gawaarida Guryaha ee TOGG Baahida ayaa la ururin doonaa ... Waa tan tirada la bixinayo | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBaahida loo qabo Gawaarida Guryaha TOGG waa la ururin doonaa…
01 / 01 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
baahida loo qabo tond baabuur guri ayaa la ururin doonaa
Turkey ayaa gaari gudaha qeyb kasta oo ciyaarta, taageerayaasha laga soo ururiyey hal daraasad hore-dalabka ah la bilaabay. Si loo ururiyo baahida loo qabo in lagu sameeyo gudaha jirka ee TOBB waxaa loo qorsheeyay in lagu aruuriyo 30-40 kun TL si lacagta loogu bixiyo. Ururka ayaa waraaqo u diri doona qolalka.
'Fasalka buuxa' Citizens beerta bilaabay diyaarinta baabuur Turkey ee codsiyada baahida hore. Madaxweyne Recep Tayyip Erdo onan maalintii lagu soo bandhigayay gaariga gudaha waxaa loo yeeray ka hor iibsiga si loogu baaro isku duwaha hay’ada oo laga soo saaray hal il.
Sida ay sheegayaan wararka, barashada afku ee isuduwidda dunida ganacsiga ee Turkey Chambers iyo is-weydaarsiga Stock Midowga (TOBB) u ogolaan doonaa. 'Waxaan diyaar u nahay inaan helno farriimaha' ka socda dhammaan Anatolia ayaa lagu dari doonaa liiska lacag bixinta.
Turkey ayaa Initiative Group (TOGG) Baabuurta la tirooyinka ka baxsan shaqada si loo ogaado tirada iyo lacagta ah kuwa doonaya in ay helaan baabuurka bilaabay.
Laga soo bilaabo wakhtigii la aasaasay warshadda, lacagta hor-bixinta ayaa lagu soo uruurin doonaa koontada si loo abuuro. Moodhkan, waxaa lagu sheegayaa in qaar ka mid ah maalgelinta looga baahan yahay maalgashiga warshadda gawaarida la soo bandhigi doono.
TOBB WAA DIIN
Waxaa la bartay in TOBB ay waraaq u diri doonto qolalka isla markaana ay is weydaarsanayaan waxyaabaha ku saabsan lacag-bixinta maalmaha soo socda. 81 degmo, 160 degmo oo ku faafay 365 qol iyo ururka ugu sarreeya hawlgallada isweydaarsiga TOBB'un ayaa dardargelin doona Qaddarka lacag bixinta ayaa la filayaa in lagu go'aamiyo 30-40 kun oo rodol.
Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha Bursa (BTSO) iyo xubin ka tirsan gudiga TOBB Ibrahim Burkay, ayaa la bilaabi doonaa sababta oo ah baahida loo qabo iibsiyada baabuurta guryaha ee laga soo bilaabo Anatolia oo dhan, ayaa taageeri doonta baabuurta gudaha iyo tan qaran, ayuu yidhi.
Burkay, “Ololahan waxaa la hormariyay baahiyadii ka jirtay saldhiga. Taageerada ugu weyn ee warshaddu waxay ahaan doontaa ololahan. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira baahi loo qabo ku dhawaad ​​175 unug, oo ah tiro soo saar sanadle ah. Ololaha iibsiga iibsigu wuxuu tallaabo muhiim ah u noqon doonaa sidii tan loo xaqiijin lahaa.
TESLA waxay heshaa PRE-ORDER
Madaxweynayaasha hoolka iyo sarrifka saamiyada ayaa caddeeyey in dalabka hor-u-bixinta lagu sameeyay moodellada Tesla oo ay yiraahdeen, "Waxaan diyaar u nahay inaan gacmaheena ku dhajinno dhagax. Shirkadda soo saarta gawaarida korantada ee Tesla ayaa ah nooca ugu horeeya ee Cybertruck, 200 usbuuc ka dib markii la soo saaray amarka hordhaca ah wuxuu helay XNUMX kun.
Xaqiiqda ah in warshadda laga dhisi doono Bursa sidoo kale waxay abuurtay farxad magaalada dhexdeeda ah. Madaxweynaha BTSO Ibrahim Burkay, awoodda waxsoosaarka magaalada ee warshadaha gawaarida, wuxuu tababaray agabyada aadanaha iyo fursadaha saadka si ay u gutaan mas'uuliyaddan taariikhiga ah, ayuu yiri. Burkay, "Bursa, qabsado kaabayaasha wax soo saarka sare iyo technology advanced in industry ee si our saarka gaari qaranka ee Turkey si xoogan dareemi doontaa," ayuu yiri.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay yihiin mid ka mid ah ururradii ugu horreeyay ee ku dhawaaqo taageeradooda soosaarida gawaarida gudaha iyo inay ka shaqeynayaan iskaashiga Xafiiska Maalgashiga Madaxtooyada iyo Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda si ay u keenaan maalgashiga Bursa, ayuu yidhi Burkay, Waxay u sameysay kaabayaal adag mashruucayaga gawaarida ”.
ZORLU: DHAMMAAN DIIWAANKA MAQALKA AHAAN XAALAD AH
Ahmet Nazif Zorlu, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha ee Zorlu Holding, oo ah lamaane TOGG ah, ayaa sheegay in dhamaan kunka gaari ee rakaabka ah ee loo adeegsado shirkadahooda lagu badali doono baabuurta guryaha.
HARGAYSAA INUU XAQ U LEEYAHAY
Gaariga ayaa la sii daayay markii Turkey u bedeli doonaa Magaaleynta ah. Wadooyinka ayaa lagu waafajin doonaa tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee gaariga gudaha. automakers Guriga la tallaabo muhiim Turkey ee waddooyinka injineernimada 'oo duurka ku badbaadi doontaa. Hawlaha wadooyinka waaweyn, ee lagu dhex daray sirdoonka macmal sida waafaqsan tikniyoolajiyadda gaariga, ayaa dardar gashay. Wadooyinka smart iyo calaamadaha hadalka, darawalada ayaa la siin doonaa digniino deg deg ah si looga hortago shilalka suurta galka ah.
Kordhi KALSOONAHA badan
Marka loo eego qorshayaasha wax soo saarka ee ay shaaciyeen soosaarayaasha gawaarida; Marka la gaaro 2022, 100 nooc oo baabuurta korantada ah ayaa laga heli doonaa adduunka oo dhan. Sanadka 2030, 40 boqolkiiba soo saarista gawaarida caalamiga ah waxay noqon doontaa koronto halka 46 boqolkiiba ay noqon doonaan kuwo isku-dhafan. automakers Guriga la Turkey, dunida yeelan doonaan in ay qabsadaan ciyaaryahanka diinta cusub.
Mid ka mid ah isbeddelada uu baabuurku keeni doono waa in loo beddelo saldhigyada gaaska xarumaha deynka. Barta ayaa lagu riixay si loo horumariyo tikniyoolajiyadda bateriga ee loo baahan yahay iyadoo lala kaashanayo dadweynaha iyo waaxda khaaska ah.
Tiknoolajiyadda baytariyada ee la soo saaray waxay saameyn ku yeelan doonaan qaybo badan oo aan ka ahayn baabuurta. Tirada saldhigyada ku amraya oo ku yaalla 1.000 ee Turkey sii korodhsan doonaa waqti gaaban. Wixii ka dambeeya 2022, boqolaal saldhigyo xukun ah ayaa la dejin doonaa, gaar ahaan jidadka waaweyn ee u dhexeeya Istanbul iyo Ankara.
Fiiri Profile buuxa ee Betül
'Shirkii Railway' oo lagu qabanayo Ankara
Shirka Wareega Gaadiidka Waddanka ee Samsun
Baahida wayn ee Yurub ka timid basaska korontada
Baahida Ballaadhan ee loogu talagalay Maraakiibta Guryaha Guriga ee Yurub